သစ်သားခွေးချုံပုတ်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြီး၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းလက်အိတ် - Kudi
Suzhou Kudi ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် တရုတ်နိုင်ငံ၌အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးကိရိယာများနှင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်သောခွေးမွှေးများထုတ်လုပ်မှုတွင်အကြီးဆုံးသောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိစ္စကို ၁၉ နှစ်ကျော်ကြာအထူးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်ရှန်ဟိုင်းဟောင်ကျောင်လေဆိပ်မှရထားဖြင့်နာရီဝက်သာလမ်းလျှောက်နိုင်သော Suzhou တွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံနှစ်ခုရှိပြီးအဓိကအားဖြင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိရိယာများနှင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောခွေးပုံးများ၊ ကော်လာများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အရုပ်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှု9ရိယာမှာစတုရန်းမီတာ ၉၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
ထုံးစံအကြီးစား Duty ရုပ်သိမ်းပေးရန်ခွေး Leash
ထုံးစံအားဖြင့်အကြီးစားတာဝန်ခံဆွဲယူနိုင်သောခွေး Leash ၁။ ဆွဲယူနိုင်သောဆွဲကြိုးသည်ကျယ်ပြန့်ပြားသောဖဲကြိုးကြိုးဖြစ်သည်။ ဒီဒီဇိုင်းကသင့်ကိုကြိုးကိုချောချောမွေ့မွေ့ပြန်လည်စေပြီးခွေး leash ကိုအကွေ့အကောက်များသော၊ ထို့အပြင်ဤဒီဇိုင်းသည်ကြိုး၏သက်ရောက်သောincreaseရိယာကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်၊ ဆွဲအားကြိုးအားပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရစေပြီးဆွဲအားကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီးသင်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ၂.၃၆၀ °ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိသောအကောက်ခွန်ကင်းရှင်းသည့်ခေါက်သိမ်းနိုင်သောခွေး leash သည် ...
မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းရေးခွေးများအတွက်အစေးကပ်သောခွေးများအတွက် ၁။ ဤခွေးများအတွက်မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းရေးအတွက်အစေးကပ်သောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ 2. ငါတို့၏ slicker brush ပေါ်ရှိကွေးကောက်ဝါယာကြိုးများသည်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အင်္ကျီထဲသို့နက်ရှိုင်းစွာထိုးဖောက်နိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ခွေးများအတွက်မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းအောင်ဖြူးအောင်ဖြီးလိမ်းထားသောဖြီးသည်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုအသုံးချပြီးပျော့ပြောင်းပြီးသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီးနူးညံ့။ တောက်ပသောအင်္ကျီဖြင့်ချန်ထားလိမ့်မည်။ 4. ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းအောင်ဖြူးအောင်ဖြည့်ထားသော brush သည် ... \_ t
အကြီးစား Dactactable ခွေး Leash
Heavy Duty Retractable Dog Leash ၁။ Heavy Duty Retractable Dog Leash ၏အမှုကိစ္စသည်ပရီမီယံ ABS + TPR ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးမတော်တဆကျဆင်းခြင်းဖြင့်အမှုကွဲခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ၂။ ဤပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သော leash သည် 5mm အထိတိုးချဲ့နိုင်သောရောင်ပြန်နိုင်လွန်နိုင်သည့်တိပ်ဖြင့်ယူဆောင်သွားသည်။ ညအချိန်တွင်သင်၏ခွေးကိုအလုပ်လုပ်သောအခါပိုမိုလုံခြုံမှုရှိလိမ့်မည်။ 3. Heavy Duty Retractable Dog Leash သည်အကြိမ် ၅၀,၀၀၀ အထိချောချောမွေ့မွေ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာရန်အားကြီးသောနွေ ဦး လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ။ ခွေးကြီးများ၊ အလတ်စားနှင့်သေးငယ်သည့်ခွေးများအတွက်သင့်တော်သည်။
အဘယ်ကြောင့်အချို့သောခွေးသည်အခြားသူများထက်ပို hyper ပါသလဲ
ခွေးတွေပတ်ပတ်လည်မှာခွေးတွေကိုတွေ့ရပြီးတချို့ဆိုရင်ခွန်အားမရှိတဲ့စွမ်းအင်ရှိပုံရတယ်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မိဘများသည်သူတို့၏ခွန်အားမြင့်မားသောခွေးကို“ အလွန်ကောင်းသည်” ဟုချက်ချင်းခေါ်တတ်ကြသည်။ အချို့ခွေးများသည်အခြားသူများထက်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ များပြားသနည်း။ မွေးမြူရေးဝိသေသလက္ခဏာများဂျာမန်သိုးထိန်းများ, နယ်စပ်ဒေသ Collies, Golden Retrievers, Si ...
သင့်ခွေးရဲ့ပေါင်တွေထဲမှာချွေးဂလင်းတွေရှိတယ်။ ခွေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ၌သားမွေးများမပါဝင်တဲ့နှာခေါင်းနှင့်ခြေဖဝါးများကဲ့သို့ချွေးထွက်စေသည်။ ခွေးရဲ့ဖောပေါ်အရေပြားအတွင်းပိုင်းကချွေးဂလင်းတွေပါရှိပါတယ်။ လူသားများကဲ့သို့ခွေးတစ်ကောင်သည် ဦး နှောက်အာရုံကြောသို့မဟုတ်ဖိစီးမှုခံရသောအခါ ...
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်တိုင်းသည်သူတို့၏ခွေးများအကြောင်း၊ ခွေး၏အနှစ်သက်ဆုံးအိပ်သည့်အနေအထားအကြောင်းပိုမိုသိလိုကြသည်။ ခွေးတွေဟာအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာတွေ၊ ခဏခဏအိပ်နေခြင်းဟာသူတို့ဘယ်လိုခံစားနေရကြောင်းတွေအများကြီးဖော်ပြပေးတယ်။ ဤတွင်အိပ်နေကျနေရာများနှင့်သူတို့ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုဖော်ပြပါမည်။ ဘက်မှာ ...
Suzhou Kudi Trade Co. , Ltd. သည်တရုတ်နိုင်ငံ၌အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အ ၀ တ်အထည်ထုတ်လုပ်မှုတွင်အကြီးမားဆုံးထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
စက်ရုံသည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ Suzhou၊ Wuzhong ခရိုင်၊ Wangshan စက်မှုဥယျာဉ်တွင်တည်ရှိသည်။